I-FARO izokhombisa ubuchwepheshe bayo be-3D obunemibono yokwakheka komhlaba nokwakhiwa eWorld Geospatial Forum 2020 - Geofumadas
NgoJanuwari, 2020 GPS / Izinsiza kusebenza, Innovations
Ukuze siqhakambise ukubaluleka kobuchwepheshe be-geospatial emnothweni wedijithali kanye nokuhlanganiswa kwayo nobuchwepheshe obusha abasafufusa emikhakheni ehlukene yomsebenzi, umhlangano waminyaka yonke weWorld Geospatial Forum uzoba ngo-Ephreli olandelayo.
I-FARO, umthombo othembeke kakhulu emhlabeni wokulinganisa i-3D, ubuchwepheshe be-imaging kanye ne-realisation, ukuqinisekisile ukubamba iqhaza kwayo kwi-World Geospatial Forum 2020 njengoMxhasi Wenkampani. Umcimbi uzoba ngo-Ephreli 7 kuya ku-9, 2020 eTaets Art & Event Park, e-Amsterdam, eNetherlands.
I-FARO iletha ukuqonda nokubaluleka okuyisihluthulelo ekwakhiweni nasezingxenyeni ze-geospatial ngezixazululo zayo ku-Digital Construction, ama-Digital Twins, i-Cloud Collaboration, i-High-Speed ​​Reality Capture, nokuningi. Izithunywa eMhlanganweni Wezwe Womhlaba zizokwazi ukuhlangabezana nalezi zixazululo namacala azo okusebenzisa edokodo lombukiso le-FARO, kanye nasezingxoxweni ezahlukahlukene zokukhuluma ezinhlelweni zezimboni.
"IWorld Geospatial Forum iyindawo yokuhlangana nabaholi bemibono futhi ngizoxoxa ngamathrendi wakamuva we-geoscience nangokwakhiwa kwamakhompiyutha ezakhiweni, ezobunjiniyela nokwakha," kusho u-Andreas Gerster, oyiPhini likaMongameli Yokuthengisa Komhlaba Wonke Kwokwakhiwa kweBIM. “UFARO ubengomunye wabashayeli abaphambili bezinto ezintsha kusukela ezinsukwini zokuqala zokufakwa kwedijithali. IWorld Geospatial Forum isenza sikwazi ukwethula izixazululo ezisezingeni eliphakeme zehardware nezesoftware eziqinisekisa ukuthi izinkulungwane zamakhasimende emhlabeni wonke ziyazuza ngokuthwebula idatha okunemba okuphezulu kakhulu kwe-3D, ukucubungula idatha okusheshayo nokushesha, izindleko zephrojekthi ezincishisiwe kanye ukunciphisa imfucuza futhi kwandise inzuzo. Silangazelele ukukhuluma nababekhona ngebhizinisi lakho futhi sixoxe ngokuthi i-FARO ingakusiza kanjani ukuhambisa ukuhamba komsebenzi kwakho kahle. ”
Izixazululo zobuchwepheshe be-3D ezibukwayo ze-FARO kube yinto edonsayo enkulu embonini yezokwakha, yokwakha nobunjiniyela (i-AEC) e-World Geospatial Forum kule minyaka edlule. Ubuholi bomcabango benkampani abugcini nje ngokushayela ukwamukelwa kwendawo kwi-AEC, kepha kuya kuba ngumshayeli ophambili njengoba imboni iqhubeka nokuqhubekela phambili ekwenzeni ikhompyutha.
“Kusukela eminyakeni embalwa edlule, iGeospatial Media ibigxile ekuthuthukiseni ubukhona bethu emakethe ye-AEC, njengoba sikholwa ukuthi ubuchwepheshe be-geospatial buba yinto esemqoka kulesi sigaba. Siyaziqhenya futhi sibophezelekile ukuthi i-FARO iqhubeke nokuxhasa kulo lonke lolu hlelo futhi sibheke phambili kobunye ubudlelwano obunezithelo ne-FARO e-World Geospatial Forum kulo nyaka, ”kusho u-Anamika Das, oyiPhini likaMongameli Wezokuthuthukiswa Kwamabhizinisi kanye Nokufinyelela ku-Geospatial Media and Communications. .
I-FARO® ingumthombo othenjiwe kakhulu emhlabeni wobuchwepheshe bokukala, kwe-imaging nobuchwepheshe be-3D. Le nkampani ithuthukisa futhi ikhiqize izixazululo ezinqenqemeni ezinika amandla ukubamba, ukukala nokuhlaziya okuphezulu kwe-3D ezimbonini ezahlukahlukene, kufaka phakathi ukukhiqiza, ukwakha, ubunjiniyela nokuphepha komphakathi. I-FARO inikeza ochwepheshe be-AEC ubuchwepheshe obuhle bokuhlola kanye nesoftware yokukhomba ifu ebenza bakwazi ukuletha izindawo zabo zokwakha kanye nengqalasizinda emhlabeni wedijithali (kuzo zonke izigaba zomjikelezo wempilo yabo). Amakhasimende e-AEC ahlomula ngekhwalithi ephezulu, ukuthunjwa kwedatha okuphelele, izinqubo ezisheshayo, izindleko ezincishisiwe zeprojekthi, imfucuza encishisiwe, kanye nenzuzo ekhuphukile.
Mayelana neForamu Yezwe Yezwe
I-World Geospatial Forum ingumbuthano waminyaka yonke wabasebenzi nabaholi be-geospatial abangaphezu kwe-1500 abamele yonke imvelo ye-geospatial: inqubomgomo yomphakathi, ama-ejensi ezemephu kazwelonke, izinkampani zemikhakha ezimele, izinhlangano zamazwe amaningi nezentuthuko, izikhungo zesayensi nezezifundo, futhi ngaphezu kwakho konke , abasebenzisi bokugcina bakahulumeni, izinkampani nezinsizakalo zezakhamizi. Ngengqikimba ethi 'Ukuguqula Umnotho ku-5G Era - The Geospatial Way', uhlelo lwesi-12 lwengqungquthela luzogqamisa ukubaluleka kobuchwepheshe be-geospatial emnothweni wedijithali nokuhlanganiswa kwawo nobuchwepheshe obuvelayo obufana ne-5G, AI, izimoto ezizimele, iBig Data, I-Cloud, i-IoT ne-LiDAR ezimbonini ezahlukahlukene zabasebenzisi, kufaka phakathi amadolobha edijithali, ezokwakha nobunjiniyela, ezokuvikela nezokuphepha, i-ajenda yentuthuko yomhlaba, ezokuxhumana ngocingo nobuhlakani bebhizinisi. Funda kabanzi ngenkomfa e www.geospatialworldforum.org
Lesi sithangami esidumile sizokwandisa ulwazi mayelana nobubanzi kanye nezinzuzo zobuchwepheshe be-geospatial futhi sizohlinzeka ngezixazululo ezisebenzayo nezisebenzayo ezinikela ekwenzeni ngcono isikhala esisizungezile.
Thumela Previous«Langaphambilini Yini okungafani - izinhlobo nezinhlelo zokusebenza
Post Next I-Digital Twin - Ifilosofi yenguquko entsha yedijithaliOkulandelayo »